चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी र जापानी वैज्ञानिकलाई संयुक्त रुपमा दिने घोषणा | Hamro Doctor News
चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी र जापानी वैज्ञानिकलाई संयुक्त रुपमा दिने घोषणा
स्टकहोम, १५ असोज । सन् २०१८ को चिकित्साशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार अमेरिकी र जापानी वैज्ञानिकलाई संयुक्त रुपमा दिने घोषणा नोबेल समितिले गरेको छ । कारोलिन्स्का इन्स्टिच्यूटमा भएको नोबेल सम्मेलनले आज अमेरिकी वैज्ञानिक जेम्स पी. एलिसन र जापानी वैज्ञानिक तासुकु होन्जुलाई संयुक्त रुपमा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
दुवै वैज्ञानिकले क्यान्सर रोगको उपचारका क्षेत्रमा नवीन खोजका लागि सो पुरस्कार दिएको नोबेल समितिले जनाएको छ । यसैबीच, स्वीडेनको अदालतले साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कारका लागि मनोनयन गरिएका ७२ वर्षीय फ्रान्सेली साहित्यकार जाँ–क्लाउड आर्नोल्टलाई बलात्कारको आरोपमा दुई वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।
स्टकहोम जिल्ला अदालतले साहित्यकार आर्नोल्ट दोषी रहेको पुष्टी भएको बताएको छ ।
आर्नोल्टकी पत्नी स्वेडिस एकेडेमीको सदस्य रहेकी छिन् । यही एकेडेमीले साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कारका विजयी घोषणा गर्दछ । यिनै दुईवटा विवादका कारण यसवर्ष साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार नदिइने भएको छ । बलात्कारको आरोप नोभेम्बर २०१७ मा उठेको थियो । हलिउडका चर्चित व्यक्तित्व हार्भे वाइन्स्टाइनमाथि बलात्कारमा दोषी पाइएसँगै साहित्यकार आर्नोल्टको मुद्दा सार्वजनिक भएको हो । स्वीडेनको दैनिक अखबार डाजेन्स न्यीटरले आर्नोल्टमाथि १८ जना महिलाले बलात्कार, यौनशोषण वा तनाव दिएको दाबी गरेको खबर छापेको थियो । रासस
#जेम्स पी. एलिसन
Last modified on 2018-10-02 15:30:43